Muwaadinimada Guddiga maalgashiga ayaa tixgelin doonta dalabka muwaadinimada natiijada ka soo baxana waxay noqon kartaa in la bixiyo, la diido ama dib loo dhigo sabab, dalab muwaadinimo oo maalgashi ah.
Celceliska waqtiga howsha laga bilaabo helitaanka arjiga ilaa ogeysiinta natiijada waa seddex (3) bilood. Halka, xaaladaha gaarka ah, la filayo in waqtiga howsha ay ka badnaan doonto seddex (3) bilood, wakiilka idman ayaa lagu wargalin doonaa sababta dib u dhaca la filayo.
Codsiga muwaadinnimada maalgashi waa in lagu gudbiyaa qaab elektiroonig ah oo lagu daabaco wakiil wakiil idman oo ka wakiil ah codsade.
Dhammaan dukumiintiyada lagu soo gudbiyay arjiga waa inay ahaadaan Luqadda Ingiriisiga ama tarjumaad la xaqiijiyey oo ku socota Afka Ingiriiska.
FG: Turjumaad la sugay waxay ka dhigan tahay turjumaad uu sameeyay mid turjumaan xirfad leh oo si rasmi ah loogu aqoonsan yahay maxkamad sharci, hay'ad dawladeed, urur caalami ah ama hay'ad rasmi ah oo la mid ah, ama haddii laga hirgaliyo wadan aysan jirin turjumaan rasmi ah oo la aqoonsan yahay, tarjumaad ay hirgalisay shirkad doorkeeda ama ganacsigeedu saameyn ku yeelanayo tarjumaad xirfadeed.
DHAMMAAN dukumiintiyada taageeraya ee loo baahan yahay waa in lagu lifaaqaa codsiyada ka hor inta aysan ka shaqeyn qeeybta.
Dhammaan codsiyada waa inay la socdaan shuruudaha looga baahan yahay dib-u-celinta aan la soo celin iyo khidmadaha foojignaanta ee codsadaha guud, xaaskiisa ama saygeeda iyo mid kasta oo ku tiirsan u qalma.
Meeshii la siiyay dalab muwaadinimo maalgashi, Qeybtu waxay ku wargalin doontaa wakiilka idman in maalgalinta uqalmida iyo ujradaha ujuurada maamulka dowlada ay tahay inla bixiyo kahor inta aan lasiinin Shahaadada Jinsiyada
Meeshii lagu diidey codsi, codsaduhu wuxuu qoraal ku codsan karaa dib-u-eegis Wasiirka.